China Waterproof Wifi App Access Control Reader Door Lock ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
တရုတ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးရောင်းချနေသည့် Waterproof Wifi App Access Control Reader Door Lock ထုတ်လုပ်သူ
Waterproof Wifi App Access Control Reader Door Lock ၏ နိဒါန်း-
ရေစိုခံ Wifi App Access Control Reader Door Lock သည် စကားဝှက် သို့မဟုတ် စမတ်ဖုန်းသော့ဖွင့်ရန် တံခါး/တံခါးများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ အသုံးပြုသူသည် ဧည့်သည်များ သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများထံ E-keys ပေးပို့ခြင်းဖြင့် တံခါးများကို အဝေးမှသော့ဖွင့်နိုင်သည်။ သင့်သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် ဧည့်သည်များသည် APP ကို ​​ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် ၎င်းတို့သည် E-သော့များကို လက်ခံကာ တံခါးသော့ဖွင့်နိုင်သည်။ လော့ခ်ဖွင့်ခြင်းမှတ်တမ်းများကို အသုံးပြုသူမှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခြေရာခံနိုင်ပါသည်။ Bluetooth access control reader BAC600 သည် တပ်ဆင်ရန် အလွန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းအနီး (အက်ပ်တစ်ခုအသုံးပြု၍) အနီးတွင် လျှောက်သွားစဉ် သင့်တံခါးကို သော့ဖွင့်နိုင်စေမည့် အတိုအထွာယူနစ်များဖြစ်သည်။ သင့်ဖုန်းသည် သင့်သော့ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ဖုန်းကို BAC600 smart access control ဖြင့် ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။
Waterproof Wifi App Access Control Reader Door Lock အတွက် ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ-
1. လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း- အက်ပ်+ စကားဝှက်+ကတ်
2. အက်ပ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စကားဝှက်ကို အက်ပ်မှထုတ်လုပ်ပြီး အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
3. cloud ဝန်ဆောင်မှုတွင် ရက်စွဲသိုလှောင်မှု။
4. အသုံးပြုသူအား အဝေးမှ ထည့် သို့မဟုတ် ဖျက်နိုင်သည်။
6. မှတ်တမ်းကို အဝေးမှ စစ်ဆေးနိုင်သည်။
7. အက်ပ်တစ်ခုသည် စနစ်များစွာကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
8. ပုံမှန်တံခါးပေါက်စနစ်မှ bluetooth smart door access စနစ်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လွယ်ကူသည်။
9. ခွင့်ပြုချက်အဆင့်အမျိုးမျိုးဖြင့် APP မှတစ်ဆင့် eKey များကို မျှဝေပါ။
10. ကီးပတ်ကာကွယ်မှု- မှားယွင်းသော လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကို5ကြိမ်ထည့်သွင်းပြီးနောက်5မိနစ်ကြာ သော့ခတ်ထားသည်။
11. Pseudo လျှို့ဝှက်ကုဒ်- မည်သည့်ဂဏန်းများတွင်သော့သော့၊ နောက်ဆုံးဂဏန်းများသည် လျှို့ဝှက်ကုဒ်အစစ်ပါရှိလျှင် လော့ခ်ကို လော့ခ်ဖွင့်မည်ဖြစ်သည်။
12. အော်တိုလော့ခ်- လော့ခ်ဖွင့်ပြီး5စက္ကန့်အတွင်း အလိုအလျောက်လော့ခ်ချခြင်း။
13. အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း- အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် အက်ပ်ဖြင့် လော့ခ်ဖွင့်သောအခါ အက်ဒမင်သည် တွန်းအားပေးသည့် အကြောင်းကြားချက်ကို ရရှိသည်။
14. မတူညီသောမိုဘိုင်းလ်တစ်ခုဖြင့် အကောင့်ဝင်ပါ- မတူညီသောမိုဘိုင်းလ်တစ်ခုဖြင့် အကောင့်ဝင်သောအခါ၊ ယခင်ဖုန်းသည် အလိုအလျောက် ထွက်ခွာသွားမည်ဖြစ်သည်။
15. မက်ဆေ့ချ် အသိပေးချက်- လော့ခ်ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်သည့်အခါ ယခင်စီမံခန့်ခွဲသူထံ မက်ဆေ့ချ်တစ်ခု တွန်းပို့သည်။
hot Tags:: ရေစိုခံ Wifi အက်ပ်အား ဝင်ရောက်မှု ထိန်းချုပ်ရေး စာဖတ်သူ တံခါးလော့ခ်